Waxaa Yab Leh in IGAD ay ka qeyb qaadaneysa dhisida Dowladda cusub Frmaajo Magacaabi Doono
Urur Goboleedka IGAD ayaa waxa uu ka hadlay Doorashadii Arbacadii ina dhaaftay ka dhacday Magaalada Muqdisho ee lagu doortay Madaxweynaha Afarta sano ee soo socota dalka hoggaamin doona.
Xoghayaha fulinta IGAD Maxbuub Macalin ayaa sheegay in ay farxad u arkaan Geeddi socodka Doorasho, taas oo ay ku tilmaameen guul taariikhi ah oo Soomaaliya diiwaanka u gashay, maadaama ay si dimoqraadi ah u doorteen hoggaamiye.
“Waxaa naga go’an caawinta Soomaaliya si loo gaaro nabad, xasillooni iyo barwaaqo iyo in dadka Soomaaliyeed ay hiigsi cusub sameystaan, Waxaan ku amaanayaa Soomaaliya in ay ka go’an tahay hormarka dalkeeda, inkastoo ay iska jiraan caqabado badan,” Ayuu yiri Maxbuub Macalin.
IGAD ayaa waxa ay sheegtay in ay door muhiim ah ka qaadan doonto bixinta taageero siyaasadeed, dhaqaale, farsamo, dhinaca nabadda, ammaanka iyo horumarka siyaasadeed ee dalka oo ay ku jiraan geedi socodka Doorashooyinka.
“Waxaan rajeynaynaa in aan sii wadno iskaashiga iyo wada shaqaynta Madaxweynaha la doortay iyo Dowladda, si loo gaaro Soomaaliya oo noqota meel nabad ah oo dunida oo dhan looga soo damaashaad tago” Ayuu markale yiri Macalin.
Ugu dambeyntii IGAD ayaa sheegtay in ay kaalin weyn ka qadan doonto dhisida Ciidanka Dowladda Federaalka si amniga loo adkeeyo, maadaama ay jiraan mararka qaar weeraro Soomaaliya gudaheeda ay ka geystaan ururka Al-shabaab.